काठमाडौँ, १९ असोज : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विजयादशमीको दिन कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई टीका लगाइदिनेगरी कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार डा
काठमाडौं, १७ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चीन फिङको नेपाल भ्रमण छिट्टै हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सीको नेपाल भ्रमण मितिबारे भने
रिपोर्टर्स नेपाल, १७ असोज । केही महिना अघि तामझामका साथ तीनकुने क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गरियो । जडान कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि सापकोटा देखि भ्याली डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्री सहभागी थिए ।
काठमाडौं १६ असोज । नेपाल टेलिकमले फोरजीरएलटीई सेवाको नेटवर्क देशभर सातै प्रदेशका ३२ वटा जिल्लाका प्रमुख सहरहरुमा विस्तार गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवाको सफ्ट लन्चमार्फत फोरजीको
फोरजी सेवा शुभारम्भ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार नेपाल टेलिकमद्वारा काठमाडौँमा आयोजित देशको सातै वटा प्रदेशमा फोरजी सेवा शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गद्रै। तस्बिर :प्रदीपराज वन्त
प्रधानमन्त्री ओलीले दिए चिनियाँ भाषामा चीनलाई शुभकामना
काठमाडौं, १४ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको ७०औँ जनगणतन्त्र दिवसका अवसरमा चिनियाँ भाषामै शुभकामना दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज ट्वीट गर्दै चीनका सम्पूर्ण जनतामा शुभकामना व्यक्त गरेका
काठमाडौं, १३ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको ठेकेदार भागेकाले केही ढिला भएपनि अब बर्षदिन ननाघ्ने दाबी गरेका छन् । उनले अबको केही महिनाभित्र मेलम्चीको पानी आउने दाबी गरे
चिनियाँ राष्ट्रपति आउनुहुन्छ, तर कहिले आउनुहुन्छ म भन्न सक्दिन् : डा. भट्टराई (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण निश्चित् भएपनि भ्रमणको मिति भने तय नभएको स्पष्ट पारेका छन्
काठमाडौं, १० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयार गरेका छन् । उनले यसको संकेत बिहिबार दिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल गरेको भन्दै विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई
काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री हुने कल्पनै नगरेको तर आफ्नै जीवनकालमा मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनेर आन्दोलनमा लागेको स्मरण गरेका छन् । नेपालय
नेकपाभित्र ‘चीनपरस्त’ र ‘भारतपरस्त’ को ध्रुवीकरण, माधव नेपाल एक्लिए
काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चीनपरस्त र भारतपरस्तको विषयले फेरि प्रवेश पाएको छ । चीनसँग नजिक हुने कि भारतसँग नजिक हुने भन्ने विषयमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु नै विभाजित